PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-04-11 - Abe nokuthula ama­holide ephasika
Abe nokuthula ama­holide ephasika
KUTHELE izith­elo ez­inhle ukusebenza kwamaphoy­isa es­i­funda sase-King Cetshwayo kanye nazo zonke iz­inhlaka abebam­bisene nazo, nok­wenze ukuthi zehle kakhulu izigameko zezin­gozi kanye nobu­gengu.
Okhu­lumela amaphoy­isa aseKing Cesth­wayo uKapteni Mbon­geni Md­lalose ubonge kakhulu umphakathi, ngokuthi ubam­bisane nabo bengamaphoy­isa, ngokuthi bagcine yonke imi­thetho abay­ibek­ile, ukuze baphephe ezin­gozini.
‘Ukut­shala kakhulu amaphoy­isa kusukela emadolob­heni kuze kuy­ofika emakhaya, lapho obekuh­langene khona abazal­wane kanye nezivim­bamzila, yikhona okus­in­ci­phis­ele izig­il­amkhuba,’ kuc­haza uMd­lalose. Uphinde wabonga abezinkam­pani zam­ab­hasi kanye na­matek­isi ngokuthi, babe nez­inhlelo zoku­cija abashayeli ngaphambi kwama­holide.
‘Okunye okusithokozise kakhulu, ukubona labo abebe­vakashele ezin­daweni zokuz­i­jab­u­lisa, ezigu­dle ul­wan­dle beziphethe kahle, begcina ne­mi­thetho yonke abebey­ibekelwe.’
UMd­lalose uthe bazo­qhubeka nomkhankaso wabo wokuqin­isa isandla ngisho es­ed­lulile ama­holide, ukuze baqinisekise ukuthi baya­boshwa abapham­bana nom­thetho.